Daawo: Dibad-bax ka dhan ah Farmaajo oo ka socda qeybo ka mid ah Muqdisho |
Muqdisho(GNN):-Aagga Mirinaayada ee degmada Cabdicasiis waxaa hadda ka billowday banaanbaxyo looga soo hor jeedo madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waxayna dadka dhigaya ku qeylinayaan erayo ay ku cabirayaan shacuurtooda.
Dadka banaanbaxaan dhigaya oo wata cod baahiyeyaal ayaa ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo, waxayna leeyihiin, “Kaligi-taliye dooni meyno, Farmaajo ha dhaco, mudo kororsi dooni meyno, Farmaajo waa gacan ku dhiigle” iyo erayo kale oo ay ku muujinayaan diidmadooda ku aadan mudo kororsigii dhacay 12-kii bishan.
Sidoo kale warbaahinta madaxa-banaan ayaa goordhaw gaartay halka ay banana-baxyadu ka bilaawdeen, waxaana lagu wadaa in xubnaha hoggaaminaya dibad-baxayaasha ay warbaahinta la hadlaan.
Halka uu banaanbuxu caawa ka bilaawday ee Mirinaayo waxaa gacanta ku haya ciidamo ka soo hor jeeda mudo kororsiga Farmaajo, kuwaas oo shalay dagaal ka dhacay aagaas uga awood roonaaday ciidamo kale taabacsan madaxda waqtigu ka dhamaaday ee dowladda federaalka.
Waxaa xusid mudan in dagaalkii shalay uu ka bilaawday banaanbax ay dhigayeen dad shacab ah, kaas oo ka bilaawday isgoyska Fagax ee kala qeybiya degmooyinka Yaaqshiid iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir.
Xaaladda magaalada Muqdisho oo maanta deganeed, kadib dagaalladii shalay iyo xalay ayaan caawa marti gelinaysa banaanbaxyo laga cabsi qabo inay sii xoogeystaan, isla markaana ay sababaan isku dhacyo hor leh.